ANKORONDRANO : Jiolahy nisintona findaina vehivavy mpamily fiara nifanenjehan’ny fokonolona
Natolotra ny Fampanoavana ny sabotsy 02 novambra 2019 lasa teo ilay jiolahy nanapoaka basy nandritra ny nanenjehan’ny fokonolona azy teny Ankorondrano. 4 novembre 2019
Raha ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny Polisim-pirenena dia lehilahy iray no voasambotry ny fokonolona teny amin’ny faritra Ankorondrano ny zoma 01 novambra 2019 lasa teo noho ny antony halatra mita-piadiana. Findaina vehivavy iray teo am-pamiliana ny fiarany no nosintonin’ity jiolahy ity, teo Ankorondrano tamin’io zoma io tokony ho tamin’ny 06 ora sasany hariva.
Nanararaotra ny fitohanan’ny fifamoivoizana teny an-toerana ity olon-dratsy ka raha sendra variana ilay vehivavy no nosintoniny ny finday avo lenta teny an-tanany. Niantso vonjy avy hatrany ity farany raha efa nanavotra aina nitsoaka ilay olon-dratsy. Ny manodidina izay nahita ny zava-nitranga kosa dia nanenjika ilay lehilahy avy hatrany, ka afaka fotoana fohy dia voasambotra izy. Nanapoaka basy moa ity mpanendaka ity nandritra ny fifanenjehana saingy tsy nampihemotra ireo fokonolona nisambotra azy izany.
Nentin’ny filoham-pokontany sy ny fokonolona teo anivon’ny Paositry ny polisy Ankorondrano izay raha efa niharan’ny hatezeran’ny fokonolona. Rehefa nosavain’ny polisy anefa ralehilahy dia tsy tratra teny aminy ilay basy, noho izany dia nisy avy hatrany ny fikarohana natao. Nentin’ny polisy nanaraka fitsaboana teo anivon’ny HJRA avy hatrany kosa anefa izy noho ny ratra nahazo azy. Tokony ho tamin’ny 10 ora alina no hita teny an-toerana ny basy vita gasy 01 fantantra fa napoakan’ ilay jiolahy. Natomboka avy hatrany kosa ny fanadihadiana rehefa avy nahazo fitsaboana izy.